Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoRevolution, DHAAMSA GABAABAA!
Garaagarummaa xiqqaa ilaalcha dhunfaatiin nu jidduu jiru osoo hin tahin walfakkeenya guddaa sabummaan nu keessa jiru dhageeffannee, hubanneefi qabannee yoo ittiin hojjanne yeroo gabaabatti galma bilisummaa gamtummaa ijaarree saba jaarraa tokkoofi walakkaa wajiija ibidda gabrummaatiin mudhuraa ture kana wal'aannee gammachiisuu dandeenya. Wayta sabni bal'aan kun abdii guutuu nurra kaayee jirutti nuti immoo miiraafi aaraa keenya liqimsinee dimimmisa hawwii sabaa yoo hin ibsine barraaqni barii bilisummaa kan amma jalaan diimate kun osoo hin baane deebi'ee nutti dukkanaa'a.
Eenyulleen namni saba kanaafiin waa hojjadha jedhee tarkaanfatu kamuu miira dhunfaa isaa osoo hin taane dursa dhahannaa onnee hawaasaa dhageeffachuu qaba. Sagalee laphaalapheessa keessoo hawaasa Oromootii dhaga'amtu gara sagalee faayda qabeessaatti jijjiiruun gochaan mirkaneessuu danda'uun injifannoo guddaa dha. Anaatu irra caala, anaatu mul'ataa, anaatu kana hojjate jechuu osoo hin taane saba gadaa dheeraa qiiqqee gabrummaa jiddutti ruuqamee jiraate kana dararaafi shira kana keessaa futtaasuuf kan hojjannu yoo tahe qofa fiinxa bahiinsa dhugaa waliin gonfachuu dandeenya.
Isin beektoonnifi hayyoonni akkasumaas hogganoonni jaarmayaalee siyaasaa Oromoo marti wal jala deemuun guddinaafi beekumsa malee wallaalummaa akka hin tahin baraa. Wal jalaa faca'uufi wal afaan deebi'uun amala jaldeessaa malee kan namaati miti. Baroota dheeraa kana teephni ba'aa gabrummaa gateetii irratti nu fe'e ture wal jalaa miliquufi duubaa wal qeequu akka tahe hubadhaa. Godaanniissi kaleessaa akka nutti hin deebineef, madaan nu qooraa jirtu akka haareyatti nu hin kulkulle suuta hooysaa malee fottooysuu dhiisaa. Ummanni keeysan summiin isin waliif galteen kennitaniif illeen isaaniif qoricha. Qorichi isin osoo wal hin taane adda addatti laattaniif immoo isaaniif summii dha. Namni dhibame baayyeen qoricha argachuu dura wayta ogeessoota yaalaa kan uffata adii uffatan argu akka nama yaala duraa (first aid) argateetti dhibee san irraa xiqqo fooyya'uu akka jalqabu hubadhaa.
Kanaafuu sabni keenya gamtaafi qindoomina Oromiyaa keessatti arge kana warra diida jiran (diaspora) irrattiis arguu kajeela. "Mana warra wal morkuu balballi banaa bulti" akkuma jedhamu san isin hayyoonni keenyaas morkiifi mormii dhiisaa. Akkuma ji'oota kurnan dabran kana namuu roga danda'uun hirmaatee qabsoo deeggaraa ture san ammaas waliin tahaa, waliis tahaa hojjachaa of dura tarkaanfadhaa malee wal sakaaluu dhiisaa. Eeyyee! Sabni keessan akka waliin hojjattan malee akka wal irratti hojjattan dhaga'uu hin barbaadu. Walittiifi waliis amanuun deemsa imala keenyaa saffisa. "Hiriyaan wal hin amanne laga ceetu maratti wal kakachiifti" tan jedhan san akka nu duraa hin taane dubbiin. Hojii keenya arraatiin yoo sabni milkaa'e akka seenaan nu yaadattu, balleessaa keenyaa arraatiin yoo sabni gufate seenaa akka nu abaartu baraa.
"Wal dhaga'uufi waliin hojjachuu keenya qofaatu dhibee sabaatiif qoricha guddaadha!"
Saphaloo Kadiir/ Abdulbasit
Posted by Hasan Ismail at 1:18 PM